ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ဘာကိုတွေးတွေး ဆန့်ကျင်ဘက်တွေးပါ ။
အဲဒီ စာအုပ်ကို အစအဆုံးတစ်လုံးမကျန် ကူးတင်ပေးဟာ.. ပြီးရင် စာအုပ်ငါ့ကို ခဏငှား...
မူရင်းစာအုပ်က ဘယ်သူရေးတဲ့ စာအုပ်လဲ မသိဘူး။ အဖုံးကို သေချာမမြင်ရလို့။
အမကတော့ စဉ်းစားရတာဆို ဖတ်ချင်ဘူး။ ပျင်းလို့။ ရသစာအုပ်လောက်သာ ဖတ်ချင်တယ် :))
စာအုပ်လာမငှားတော့ပါဘူး.. တစ်အုပ်လုံး ပြန်ရိုက်တင်ပေးပါ လို့ပဲ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်.. :D
စာအုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဘယ်မှာများရနိုင်မလဲ။ Online ကနေရော ဖတ်လို့ရနိုင်တဲ့နည်းရှိလားဟင်။ Original အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ကတော့ ဒီကစာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ ရကောင်းရနိုင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာဘာသာပြန်စာအုပ်ဆိုတော့ ဖတ်ရတာ ပိုလွယ်ကူမယ်။
တော်တော် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ စာအုပ်လေးပဲ၊ စာကြောင်းတိုတိုလေးတွေက လှစ်ခနဲ ဖတ်လိုက်ဖို့ အတွက် အတော်ပဲ၊ ပြီးမှ ကျန်တဲ့အချိန်မှာ တနုံ့နုံ့ ဆက်တွေးပေါ့...၊
Think out of the box ဆိုတာမျိုးနဲ့လည်း ဆင်တယ်၊ မျှဝေတာ ကျေးဇူးပါပဲမောင်မျိုးရေ....။
မမေဓာဝီ... မူရင်းက Paul Ardan ရဲ့ Whatever you think, think the opposite. ပါ..။
အထဲက စာတော့ မသိဘူး ဒီဇိုင်းတော့ အတော်သဘောကျသွားတယ်..
စာတော့သေချာဖတ်ကြည့်မှ ဘယ်လိုဆိုတာ သိရမှာ
ဒါနဲ့ ဘလော့လာလည်တဲ့သူတွေကို တစ်ယောက်တစ်အုပ် လက်ဆောင်ပို့ပေးမလို့ဆို ဟုတ်လား
အထဲက စာကိုတော့ မသိဘူးလေ.. ခေါင်းစဉ်ကိုပဲ ပြောကြည့်မယ်.. ဘာကိုတွေးတွေး ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုတော့ တွေးလို့ရပါတယ်... ဒါပေမယ့် အဲဒီအတွေးတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့နဲ့ လိုက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေလာမှာမဟုတ်ဘူး... ဘာကိုတွေးတွေး ဆန့်ကျင်ဘက်တွေးပါ ဆိုတာထက် ဘာကိုတွေးတွေး အတည့်၊ ဆန့်ကျင်၊ ခြုံငုံတွေးပါ ဆိုရင် ပိုသဘောကျမိမှာပဲ.. (ခေါင်းစဉ်ကိုပဲပြောတာပါ.. အထဲကစာကတော့ ဘယ်လိုနေမယ်မသိ..)
စာအုပ် အကြောင်းလေး လာဖတ်သွားတယ် မောင်မျိုး... စိတ်ဝင်စားစရာနော်။ အစ်မလည်း စာဖတ် ၀ါသနာ ပါတယ်။ ဒီရောက်တော့ e-book တွေပဲ ဖတ်ဖြစ်တော့တယ်။
မိုးယံ...ကူးတော့တင်ပေးချင်ပါရဲံ့ ဒါမယ့် အဲ့စာအုပ်က စာနည်းပြီူး ပုံတွေပဲများတယ်ကော နောက်တော့ ကြုံရင် စာအုပ် ငှားမယ်လေး)
မမေ...ဟုတ်ကဲ့ မမေ မေးထားတာ ကိုညီ ဖြေထားတယ် အောက်မှာဗျ ကျနော်လည်း ရသတွေကြိုက်တယ်ဗျ.
မီ....အေး နောက်တော့ တင်ရင်ပြောမယ်လေ ခုတော့ ငါပျင်းနေတယ်ဟ .
လပြည့်ရိပ်.... ဘယ်သူဆိုတာ သိချင်လို့ သွားကြည့်လိုက်တော့ ဆရာမမေငြိမ်း ဖြစ်နေတော့ လန့်သွားတယ်း) ကိုယ်လေးစားတဲ့သူဆိုတော့ ကျနော်နောက် အားရင် စကင်ဖတ်ပြီးတင်ပေးမယ်ဗျ ခုလောလောဆယ်တော့ ပျင်းတာကော မအားတာကောမို့ စာအုပ်က အွန်လိုင်းမှာမရှိဘူးထင်တယ် ။
ကိုညီ....အစ်ကိုလည်း ဖတ်ဖူးတဲ့ စာလေးတွေ ရီဗြူးတင်ပေးပါလားအစ်ကိုရ အစ်ကိုဆို ညီ့ထက် စာတွေအများကြီးဖတ်ဖြစ်မှာ ။
ကိုမောင်လေး..... နောက်မှနော့်း)
မချော.....လိပ်စာပို့ထားလေ စာအုပ်နောက်မှပို့မယ် အစ်မဆီမှာ မုန့်ဖိုးလာတောင်းမလို့ ။
နေ၀သန်...မင်းကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက် ခေါင်းစဉ်နဲ့လိုက်ပါပေတယ် ။
မရို့စ်.... ဟုတ်ကဲ့ အစ်မ
ညီသူ...ခွေကောင်လေး မင်းပြန်မလာသေးဘူးလားဟ သတိရနေပြီး လိပ်စာသိတယ် မင်းငါ့အကြွေးမပေးသေးရင် လာတောင်းမလို့ ။
ဟမ်... အခုမှ ပိုစ့်အဟောင်းတွေ ပြန်ဖတ်ရင်းနဲ့ ကျွန်မရဲ့ ကွန့်မန့်ကို ကိုမျိုး ပြန်ဖြေထားတာ တွေ့ရတယ်...ကျွန်မ ဆရာမ မေငြိမ်းမဟုတ်ပါဘူး.... :-)
ဟုတ်လား ဒါဆို ကျနော် လွဲပြန်ပြီပေါ့ ဆောရီးဗျး) ကျနော်က အဲ့လိုပဲမကြာမကြာ လွဲတတ်တယ် ။